Keyword Research Tsy maintsy mamaly ireo fanontaniana ireo | Martech Zone
Nijery orinasa maro nanao izay antsoiny izahay fikarohana siantifika ary gaga aho amin'ny habetsaky ny fampahalalana tsy hitan'izy ireo rehefa nanoro hevitra ireo orinasa momba ny teny fanalahidy hotratrarina izy ireo miaraka amin'ny paikadim-barotra momba ny marketing. Ireto misy fanontaniana lehibe valiny
Inona avy ireo teny lakile mitarika fiovam-po? Raha tsy fantatrao dia manome hevitra aho leveraging Analytics araka ny tokony ho izy sy ny fanaovana tatitra hahafahanao mamantatra ireo teny lakile mitondra fiara… fa tsy fifamoivoizana. A hadisoana lehibe hitanay amin'ny orinasa maro fa mifantoka amin'ny teny lakile izay mitondra fifamoivoizana fa tsy ny teny lakile izay mitondra fiara. Mitaky fotoana ny fahazoana laharana ara-dalàna - alao antoka fa mandany tsara ireo loharano ireo ianao amin'ny alàlan'ny fanondroana ireo mpitsidika izay mividy. Matetika ireo mpanolo-tsaina dia mahita teny lakile izay misy volan'ny karoka. Raha tsy mivarotra dokam-barotra amin'ny tranokalanao ianao dia mila mihoatra ny fitsidihana fotsiny - mila orinasa ianao
Inona ny teny lakile azonao amin'ny laharam-pahamehana? Satria mandany fotoana be loatra amin'ny famakafakana ny fifamoivoizana ny orinasa dia matetika izy ireo no diso ireo teny lakile izay tsy dia milahatra tsara izy ireo mety ho. Ny famantarana ny teny lakile sy ny pejy izay nandevenana anao tamin'ny laharana dia fotoana mety indrindra tweak ireo pejy ireo ary mahazo laharana tsaratsara kokoa amin'ny. Mampiasa izahay Semrush hahitana pejy sy teny lakile izay ijoroantsika. Avy eo dia manatsara ireo pejy ireo izahay ary matetika dia mahazo bontolo tsara sy fifamoivoizana.
Inona ireo lohahevitra afovoany azo sokajiana ny teny lakileo? Ny pejy ao amin'ny tranonkalanao dia afaka mitana isa amina ampolony teny lakile. Zava-dehibe ny fahazoana azy ireo lohahevitra manan-danja azo ampifanarahana amin'ny lakilen'ny fandaminana sy ny fampifanarahana ny tranokalanao. Mifanaraka amin'ny ambaratongam-piteninao ve ny ambaratongam-tranonkala? Raha tsy izany dia mety hisy ny fotoana hananganana pejy sy fizarana ao amin'ilay tranonkala izay mifantoka amin'ny fivezivezena fikarohana biolojika. Matetika izahay manome soso-kevitra vitsivitsy amin'ny pejy fitobiana organika izay mifantoka amin'ny teny lakile fa tsy vokatra na serivisy an'ny orinasa. Ireo pejy ireo dia mitarika laharana, fifamoivoizana ary fiovam-po. WordStream manana fitaovana fanalahidy izay ahafahanao mametaka teny lakile 10,000 ao anatiny ary hanasokajiny azy ireo ho anao.
Inona ny teny lakile tokony hifaninananao? Imbetsaka, ny fifaninanana ataonao dia mahazo fifamoivoizana mety ho ianao… raha mba fantatrao hoe inona no nalahatr'izy ireo fa tsy ianao. Ary koa, maro ny teny lakile mety tsy ho tratrarina tsara. Fa maninona ianao no mifaninana amin'ny teny lakile izay tsy ho resinao? Indray, Semrush no nisafidy fitaovana ho an'ity. Azontsika jerena ireo domba mifaninana ary avereno jerena ireo teny lakilen'ny laharan'ny fifaninanana hahitantsika raha manana banga amin'ny paikadin'ny votoatinay izahay.
Inona avy ireo teny lakile ahafahanao mamorona atiny izay hiteraka laharana sy fifamoivoizana? Tsara ny mamoaka lisitr'ireo teny lakile sy fehezanteny mitovy hevitra… fa andian-teny inona no azonao soratana lahatsoratra bilaogy, pejy fitobiana organika, infografika, whitepapers, ebooks, famelabelarana ary horonan-tsary amin'ny amin'izao fotoana izao izany dia mety hiteraka valiny eo noho eo? Tsy mino izahay fa tena feno ny fikarohana teny lakile raha tsy manome sosokevitra atiny miaraka amin'ny famakafakana ianao. Ny fitadiavana teny lakile long-tail (volume ambany, tena ilaina) dia mora kokoa nampiasaina WordStream.
Raha ny tokony ho izy, raha mbola tsy hitanao ny interface mpampiasa vao nohatsaraina avy Semrush, tsy mampino:
Mampiasa matetika izahay Semrush ho an'ny fanadihadiana voafetra sy WordStream ho an'ny fahitana longtail sy ny fanasokajiana ny teny lakile. Fambara: Ny Semrush rohy amin'ity lahatsoratra ity no rohy mpiara-miasa aminay.
Tags: Keywordfikarohana siantifikateny fanalahidyteny lakile longtailsemrushwordstream